Sida loo jiheeyo isticmaalayaasha iyadoo lagu saleynayo halka ay ku yaalliin WordPress | Martech Zone
Sida loo jiheeyo isticmaalayaasha iyadoo lagu saleynayo halka ay ku yaalliin WordPress
Khamiis, Juun 26, 2018 Douglas Karr
Hagaag, waa wax aad uga adag intaad moodeysid. Waa kuwan qaar ka mid ah arrimaha kugu soo dhaca:
Cinwaanada IP waa la cusbooneysiiyaa si joogto ah. Iyo keydadka keydka macluumaadka ee bilaashka ah ee loo yaqaan 'GeoIP' ayaa leh qaybo fara badan oo xog ah oo maqan sidaa darteed saxsanaantu waxay noqon kartaa dhibaato weyn.
Bogagga gudaha u baahan in wax laga qabto. Way fududahay in qof loo wareejiyo bogga guriga, laakiin ka waran haddii ay ku degaan bog gudaha ah? Waa inaad kudartaa caqliga cookie si markaas dib looguugu wareejiyo booqashada ugu horeysa ee fadhiga, kadibna aad kaligood iska dhaafto markay fiirinayaan goobta.
Caching waa loo baahan yahay maalmahan inaad u baahan tahay nidaam daaweynaya aqoonsiga isticmaale kasta. Uma baahnid hal soo booqde oo ka socda Florida inuu tago bogga Florida ka dibna booqde kasta intaas ka dib.
Codsiga xogta leh isticmaale kasta oo ku yaal bog kasta runtii way yareyn kartaa server-kaaga. Waxaad u baahan tahay inaad keydiso kulan kasta oo adeegsade ah si aadan ugu sii baahnayn raadinta macluumaadka si isdaba joog ah.
Toddobaad kasta oo la adeegsado waxay keeneen arrimo badan iyo ka badan sidaa darteed ugu dambeyntii waan iska daayay oo waxaan sameeyay baaritaanno. Mahadsanid, shirkad horey u aqoonsatay oo ay daryeeshay arrimahan adeeg, Qalabka GeotWG. GeotargetingWP waa adeeg API awood badan u leh geotarget waxyaabaha ku jira ama lagu abuurayo jihooyin bartilmaameed oo bartilmaameed ah gudaha WordPress. Waxay dhisteen afar shey oo loo adeegsan karo hadba baahidaada:
Geotargeting Pro waa sheyga ugu jecel ee loogu talagalay suuqleyda ku xiran dalabkooda dalab gaar ah sababtoo ah waa fududaan iyo astaamo awood leh. Hadda oo leh saxsanaanta qiimaha leh si ay kaaga caawiso inaad beegsato Gobollada iyo Magaalooyinka waxyaabaha gaarka ah.
Juquraafiga Geo waxay u dirtaa isticmaaleyaasha bogagga shabakadaha kala duwan iyadoo lagu saleynayo meesha ay ku yaalliin iyadoo la adeegsanayo dhowr tallaabo oo fudud. Geo Redirects plugin ee WordPress waa aalad awood leh oo kuu oggolaan doonta inaad si fudud u abuurto dib-u-habeyn ku saleysan shuruudo badan.
Calanka Geo waa addon fudud oo loogu talagalay qalabka loo yaqaan "Geotargeting Pro" kaas oo kuu oggolaan doona inaad muujiso calanka waddanka isticmaalaha hadda jira ama calan kasta oo kale oo aad rabto adoo adeegsanaya qaab fudud oo sidan ah:
[geo-flag squared = "been" cabir = "100px"]
Xayiraadaha Geo plugin loogu talagalay WordPress ayaa kuu oggolaan doonta inaad si fudud u xannibto marin u helka isticmaalayaasha meelaha qaarkood. Waad ka horjoogsan kartaa inay soo galaan boggaaga oo dhan ama si fudud u doortaan bogagga.
Barxadda ayaa sidoo kale kuu oggolaaneysa inaad dhisto oo aad ka faa'iideysato gobollada si aad u bartilmaameedsato markaa uma baahnid inaad abuurto xeerar aan dhammaad lahayn oo ku saleysan gobollo badan. Waad isku urursan kartaa waddamada ama magaalooyinka si aad ugu fududaato beegsiga adeegsadayaasha. Tusaale ahaan, waxaad abuuri laheyd gobol la yiraahdo Europe iyo mid kale oo la yiraahdo America, ka dibna si fudud ugu adeegso magacyadaas qaababka gaagaaban ama aaladaha wax lagu kaydiyo ayaa waqtiga kaa badbaadinaya. Kalluumeysiga ma aha arrin, sidoo kale. Waxay ogaadaan isticmaalaha dhabta ah ee IP-ga iyadoon loo eegin hadaad isticmaasho Cloudflare, Sucuri, Akamai, Ezoic, Reblaze, Varnish, iwm .Haddii aad leedahay wax caado ah si fudud ayaa loogu dari karaa.
API-kooda ayaa bixiya saxnaanta dhul-bixinta ugu sareysa, qaarada soo noqonaysa, dalka, gobolka iyo xogta magaalada. Maaddaama qiimaha uu ku saleysan yahay adeegsiga, waxaad si toos ah ugu xirmi kartaa API-kooda oo aad u isticmaali kartaa sida aad jeceshahay.
Ku Bilaw Geotargeting WordPress
Shaacinta: Waxaan u adeegsaneynaa xiriiriyeheena xiriirka ee boostadan tan iyo markii aan aad u jecel nahay adeegga!
Tags: goobaha xannibimagaaladadalkajuqraafiplugin geojuqraafi u wareejintajuqraafigeotargetjihada goobtagobolkabartilmaameedka waxyaabaha juqraafiyeedplugin WordPress
Caqabadaha Is-weydaarsiga Suuqgeynta ee Suuqleyda, Dadka Wax Iibiya, iyo Maamulayaasha Guud (Xog + Talo)